Kuuriyada Kuala Lumpur Petronas: laga bilaabo Dhererka Malaysia | Safarka Absolut
cunt 452 mitir sare, yaa ahaa dhismaha ugu dheer adduunka intii u dhaxeysay 1998 iyo 2003 sii wadaa inuu noqdo mid ka mid ah astaamaha waaweyn ee Kuala Lumpur, waa magaalada ugu weyn Malaysia. Soojiidasho xaqiijineysa soo dejinta shirkad weyn oo reer Maleesiya ah oo hal-abuurnimadu ay ka sarreyso wax kasta oo kale. Ma jeclaan lahayd inaad ka aragto mid ka mid ah magaalooyinka ugu firfircoon Aasiya meelaha dhaadheer dusheeda Dhismooyinka Petronas ee Kuala Lumpur?
1 Taariikh kooban oo ka mid ah Dhismooyinka Petronas
2 Waxa laga qabanayo Dhismooyinka Petronas
3 Marka laga soo tago Kuala Lumpur: waxa lagu arko Kuala Lumpur
Taariikh kooban oo ka mid ah Dhismooyinka Petronas
Bilowgii 90-meeyadii, iyo imaatinka millennium-ka cusub, magaalada ugu raaxada badan ee Malaysia waxay u baahday astaan ​​mataleysa guusha qaaradda Aasiya. Tani waa sida hawsha dhismaha ugu dheer adduunka ugu dhacday naqshadeeyaha reer Argentina Cesar Pelli, oo masuulka ka ahaa taagida laba munaaradood oo nooca casriga ah ah oo dhismahoodu bilaabmay March 1, 1993 ka dib tijaabooyin aan daalin oo ku saleysan fikirka laba munaaradood oo waaweyn oo ay tahay in lagu dhammeeyo lix sano.
Waxaa lagu dhisay badanaa waxyaabaha sida birta, shubka iyo aluminium, munaaradaha waxaa loo sameeyay in lagu sharfo dhaqanka Islaamka oo ay taageerto warshad sameysay Xiddigta Sulaymaan, ama Sideed Xidigood oo Tilmaamay, Masawirka joomatari ee loo adeegsaday gaar ahaan xilligii ay xukumayeen Al-andalus dhismayaasha badda dhexe. Sidan oo kale, dhismaha waxaa laga dhisay sideed qodob oo qeexaya muuqaalka astaantaan naqshadaha ah ee dhismahooda ay shaqeynayeen ilaa 2000 oo qof oo shaqeeya 24ka saacadood maalinba xilliyo kala geddisan. Ujeeddada?: Dhis warshad cusub afartii maalmoodba mar.
Tani waa sida 1-da Maarso, 1998, loo yaqaan 'Petronas Towers' lagu daahfuray magaalada Kuala Lumpur oo leh 88 dabaq, dhererkiisuna yahay 452 mitir, qiyaastaas oo ka sarreysay dhismaha Willis Tower ee magaalada Chicago oo ah dhismaha ugu dheer adduunka laakiin taasi, dhinaca kale, waa Waxaa dhaafey Tawaawirka Taipei, ee caasimada Taiwan, 2003.
Midoobaya buundada dhalada ah, ee caanka ah Skybridge, oo isku xira dabaqyada 41aad iyo 42aad, Dhismayaasha loo yaqaan 'Petronas Towers' waxay matalaan mid ka mid ah guulaha dhisme ee ugu muhiimsan adduunka iyadoo ay ugu wacan tahay astaamaha soo socda:
32 kun oo dariishad ah oo daboolaya wajiga hore ee dhismaha.
76 wiish oo wadar ahaan loo qaybiyay 38 daarkiiba.
Baaxad dhan 395 kun oo mitir murabac ah.
88 dabaq oo ay ka gudubtay Skybridge dabaqyadii 41aad iyo 42aad.
258 tiir wadar ahaan loo qaybiyay dhismaha oo dhan.
Ilaa 32 kiishka.
183 musqulo ayaa guud ahaan ku fiday labada dhisme.
Astaan ​​lagu fuliyo hawlo kala duwan oo ujeedkeedu ugu weyni yahay in lagu qadariyo dhammaan quruxdeeda dareenka dhererka iyo haybadda dhisme aan dhiman ee filimada sida Dabinka, oo ay weheliyaan Sean Connery iyo Catherine Zeta Jones.
Waxa laga qabanayo Dhismooyinka Petronas
Ku dhejin, Petronas Towers waxay ka kooban tahay dhismo soo jiitay dhammaan booqdayaasha, in kasta oo laga soo galo dhismuhu xoogaa wareer noqon karo, maxaa yeelay xaggiisa hoose waa Xarunta Dukaameysiga ee Suria KLCC. Mar alla markii aad gasho qolka sagxadda hoose ee tikidhada lagu iibiyo, dhammaan alaabada waa in la dalbadaa ka hor inta aan la helin aragtiyaha.
Haddii aad qaadatid wiishka, kaliya maheli doontid inaad dareento dareenka ah inaad iskaga gudubto min munaarad ilaa mid kale Skybridge waxay ku taallay 170 mitir sare, laakiin sidoo kale fiiri Kormeerka dabaqa 84aad kuu oggolaanaya inaad ka hesho qaar ka mid ah aragtiyada ugu fiican dhammaan Kuala Lumpur.
Qiimaha tikidhada ee Petronas Towers ee dadka waaweyn waa 25.50 euro, halka caruurta udhaxeysa 3 iyo 12 sano ay bixiyaan 13 euro oo caruurta kayar 3 sano bilaash.
ka jadwalka booqashada Towers Petronas Waxay u dhexeeyaan Talaadada ilaa Axadda, maadaama Isniinta ay ka xiran yihiin dadweynaha. Gaaritaanku waa suurtagal 9-ka subaxnimo ilaa 9-ka fiidnimo, inkasta oo jimcaha ay xiran yihiin inta u dhexeysa 13:00 pm iyo 14:30 pm. Marinka ugu dambeeya ee munaaradaha la ogolaado 20:30 pm.
Haddii ay dhacdo inaad doorbidid inaadan marin Towers-ka Petronas, dhacdooyin kala duwan ayaa lagu qabtaa hareerahooda oo aad ku raaxeysan kartaa markay noqoto inaad ku qanacdo dhismahan weyn. Tusaale ahaan, habeen kasta 20:00 pm, 21:00 pm iyo 22:00 pm bandhig iftiin ah hareeraha harada Xarunta Dukaameysiga ee Suria, munaasabad kuu oggolaan doonta adiga inaad ku raaxaysato jawi dabacsan halka aragtidu ka luntay Iftiiminta Petronas Towers. Haddii kale, waxaad had iyo jeer tagi kartaa Skybar ee Ganacsatada Hoteelka casho ama cabitaan inta aad ka helayso aragtiyo aad u wanaagsan dhismaha.
Marka laga soo tago Kuala Lumpur: waxa lagu arko Kuala Lumpur
Inkastoo Petronas Towers ay ka mid yihiin Soojiidashada weyn ee Kuala LumpurMagaalada caasimada ah ee Maleesiya waxaa jira howlo badan oo aad qaban karto, ha ahaato inta lagu guda jiro istaagida (magaaladu waa mid kamid ah xidigaha duulimaad kasta oo istaaga ah) ama joogitaan 3-4 maalmood ah kahor intaadan sii wadin ogaanshaha wadanka intiisa kale.
Mid ka mid ah soojiidashada weyn ee Kuala Lumpur shaki la'aan waa iyada Chinatown, mid ka mid ah Chinatowns-ka ugu weyn Aasiya halkaasoo ay ku yaalliin dukaammada waddooyinka, macbudyo midabbo leh ama dukaamada ku yaal Petaling Street ayaa nagu dhex daadinaya microcosm u gaar ah Aasiya.
Xaafad kale oo mawduuc leh oo aad ku raaxeysan karto ayaa ah Hindiya yar, xaafadda ka dhexeysa aagga Brickfields. Meel leh udgoonka curry iyo sandalwood halkaasoo aad naftaada ugu raaxeysan karto dukaamadeeda midabada leh ama macbudyo ay ku xardhan yihiin sawirro badan oo caan ah oo asalkoodu yahay joogitaanka dad badan oo Hindi ah oo Boqortooyadii Ingiriiska ay ka keentay deegaanadeeda si ay gacan uga geysato dhismaha dhismaha magaalada. Dhawaqyo taariikhi ah oo muhiimada weyn u leh dhinacyada sida Fagaaraha Merdeka, ama Fagaaraha Madaxbannaanida, oo ah meeshii calanka Malaysia uu ku beddelay kan Ingiriiska ka dib markii uu ku dhawaaqay madax-bannaanidiisa 31-kii Ogos, 1957.
Xarunta xudunta u ah dhaqammada badan ee ku wada noolaa magaalada sannado badan, Kuala Lumpur waxay ku darsaneysaa miirayaasha Hindida iyo Shiinaha qaabka Muslimiinta ee ka soo ifbaxa Masjid Negara, ama Masjidka Qaranka. Meel u qalma Kunka iyo Hal Habeennada ah ee u furan dadweynaha isla markaana ku saleysan mabaadii'da dhismeed ee loo yaqaan 'Petronas Towers', oo sidoo kale lagu taageerayo qaabka joomatariiga ee Siddeed Xiddigood.
Sida aad u aragto, Kuala Lumpur waa magaalo ku habboon in la fahmo adduunka oo la fiiriyo taariikhda qaaradda Aasiya halkaas oo saameynta reer galbeedka ama xoojinta hal-abuurnimada ay siiso booqdaha Petronas Towers oo aan ahayn kaliya astaanta weyn ee Malaysia, laakiin sidoo kale Aasiya oo dhan.
Ma jeclaan lahayd inaad soo booqato Dhismooyinka Petronas ee Kuala Lumpur?
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Kuala Lumpur Petronas Towers: Laga soo bilaabo Daaraha Malaysia